စိတ်ကူးတည်ရာ ...: 2013
Posted by lu bo at 11:15 AM No comments:
မိဘဆင်းရဲ လို့ သာသမီးဆင်းရဲတာအပြစ်မှ မဟုတ်တာ
စားတာပါ အထင်သေးတဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ မကြည့်ပ့ါနဲ့ -------
Posted by lu bo at 10:44 AM No comments:
ဘတ်စ် ကားစောင့်နေတုန်း ဘေးနားက
*ရှိတယ်။ 300 တန် ရှိတယ်။
Posted by lu bo at 10:43 AM No comments:
Posted by lu bo at 10:41 AM No comments:
သီဟနိုင် on 2013-12-01 16:25
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မေတ္တာမျှတဲ့ အဆင့်ကနေ ဇနီးနဲ့ခင်ပွန်း အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ဘယ်အချိန်ဟာ အသင့်တော် ဆုံးပါလဲ။ ချစ်သူတွေ တစ်စုံတွဲနဲ့ တစ်စုံတွဲတော့ တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တို့အတွက် အချိန်တန်ပြီ လို့ ခံစားမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ပြုသင့်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက လူမှုပတ်ဝန်းကျင် လည်းမဟုတ်သလို၊ သင့်မိသားစုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by lu bo at 10:39 AM No comments:
December 6, 2013 at 1:52am
ဒီနေ့ သောကြာနေ့ ရန်ကုန်တိုင်း (မ) သတင်းစာမှာပါတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးအခေါ်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ကြက်ဖသုံးကောင် ပုံပြင်လေးကို အားလုံးဖတ်ရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ တွေးနိုင်သလောက် တွေးကြည့်ကြပါ။
Posted by lu bo at 10:37 AM No comments:
Myint Aung shared ဒေါ်ပု လက်ရာ's photo.
ဝက်ကြေးအိုး လုပ်ရန်အတွက် အူမကြီး၊ အူချို၊ အူပိတ်၊ အသည်း၊ကျောက်ကပ်၊နှလုံး အားလုံးတို့ကို ရှာလကာရည်(သို့) မကျည်းသီးမှည့် အနည်းငယ်ဖြင့် ရေအထပ်ထပ်ဆေးထားပါ။ ဒေါ်ပုက ကြေးအိုး လုပ်စားရင်လည်း ဝက်အူပိတ်ပါထည့်စားပါတယ်။ ဝက်အူပိတ်က စားရတာအရသာရှိပြီး လုပ်နည်းက အနည်းငယ်လက်ဝင်ပါတယ်။
Posted by lu bo at 10:36 AM No comments:
အိမ်တွေမှာ ခြင်တွေ ထွက်လာတာသတိထားမိရဲ့လား...။သင်နှင့် ကလေးငယ်တွေ ခြင်ကိုက်မခံရအောင် အိမ်တွင်းဖြစ် ခြင်ဖမ်းကိရိယာလေး အကြောင်း M-Media Knowledge ကဏ္ဍ ကပြောပြချင်သည်။
အိမ်တွင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည့်ခြင်ဖမ်းကိရိယာအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
(၂) သကြားညို ရေဖန်ခွက်ဖြင့်လေးပုံတစ်ပုံ
Posted by lu bo at 10:34 AM No comments:
Posted by lu bo at 10:32 AM No comments:
ကျွန်မ ပါးပြင်မှာအမြဲ ချယ်သပါ့မရ်....
Posted by lu bo at 11:38 AM No comments:
Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ's photo.
(၁၉၆ဝ) ခုနှစ်က ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ Rosenthalဟာ ကယ်ရီဖိုးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျော်ကြားတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းစဖွင့်ချိန်မှာ Rosenthalဟာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးထံခွင့်ပန်ပြီး ဆရာ/ဆရာမသုံးဦးကို ရုံးခန်းထဲ စေလွှတ်စေခဲ့တယ်။
Posted by lu bo at 11:18 AM No comments:
ပြသနာတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ Learning English From an Inspirational Story
တစ်ခါတုန်းက စိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်နေရှာတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဟာ ပညာရှိကြီးတစ်ဦး ထံရောက်လာပြီး သူ့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုလာရောက်
တောင်းခံ ပါသတဲ့။ အဲဒီအခါ ပညာရှိကြီးက သောက်ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကို ဆားလက်တစ်ဆုပ်စာလောက် ထည့်လိုက်ပြီး လူငယ်ကိုသောက်ခိုင်းပါတယ်။
''အရသာ ဘယ်လိုနေသလဲ" လို့ ပညာရှိကြီးကမေးပါတယ်။ "အတော်ဆိုးပါတယ် ခင်ဗျာ" လို့ လူငယ်ကဖြေလိုက်ပြီး သောက်ပြီးသား ရေကိုထွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ပညာရှိကြီးက ခပ်တိုးတိုး ရယ်မောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လူငယ်လေးကို နောက်ထပ်ဆားတစ်ဆုပ်လောက် ယူခိုင်းပြီး အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ကြည်လင်တဲ့ရေကန် ကြီး တစ်ကန်ဆီသို့  ခေါ်လာပါတယ်။
Posted by lu bo at 10:58 AM No comments:
မိန်းမ” တို့ ရဲ့ အလှနှင့်တန်ဖိုး
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မွေးရာပါ ရုပ်မလှချင်နေ ဒါပေမဲ့ ဘ၀မှာ လှလှပပတော့ ရှင်သန်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည့်စုံတဲ့အသိပညာ၊ ကောင်းမွန်တဲ့စရိတ္တ၊
ထက်မြက်တဲ့ အပြုအမူ၊ သိမ်မွေ့တဲ့အပြောအဆို၊ ကြီးမြတ်တဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ မေတ္တာနဲ့ပြည့်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ရည်မလှသည့်တိုင် ဘ၀ကို အမှန်တကယ် လှပစေနိုင်ပါတယ်။
Posted by lu bo at 9:38 PM No comments:
Posted by lu bo at 9:32 PM No comments:
သမီး နင့်ကောင်လေးနဲ့ချိန်းတွေ့ မလို့ လား
ပြည်သူ့ ရင်ပြင်မှာ live show ရှိတယ်။
Posted by lu bo at 9:31 PM No comments:
- ရန်ပွဲတွေ နေ့စဉ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အိမ်အတွင်းမှာ နေသမျှ လုံခြုံမှုရှိတယ်။
- စီးပွားရေးတွေပြေလည်ချင်မှပြေလည်လိမ့်မယ် ။ တစ်ယောက်တစ်လုပ်စီ ဝေမျှ စားခြင်းက နွေးထွေးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။
Posted by lu bo at 9:29 PM No comments:
သို့ အယ်ဒီနှင့် သံလုံး...မှ ဘုရားသခင်
Khaing Lay April 30, 2010
“ဘုရားသခင်မှာ အီးမေးလ် ရှိသလား”
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ ရောက်ရောက်ချင်း စည်သူ မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးစစကြည့်ပြီး စည်သူက သူဖတ်ဖူးတဲ့ ဆရာဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုရဲ့ “ဘုရားသခင်သို့ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း” ဆောင်းပါး အကြောင်းကို ပြောပြတယ်။
Posted by lu bo at 9:27 PM No comments:
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ Link တွေပါ။ FB ပေါ်က တွေ့လို့ သိမ်းထားဖြစ် တာပါ။ မူရင်း share တဲ့သူကို မမှတ်မိတော့ဘူး။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ သဘောကျမယ် လို့ထင် ပါတယ်။ မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းတွင် အမည်အတိုင်း ကမှ အ အထိ ရှာနိုင်ပါသည်။)
Posted by lu bo at 9:25 PM2comments:
Antibiotics not for running noses နှာစေးနေတာ ပဋိဇီဝဆေး မပေးသင့်
(၁) 19-11-2011 “Taking Antibiotics for Viral infections can do More harm than good (ဗိုင်းရပ်စ်) တမျိုးမျိုး ကူးစက်ခံရတာကို ပဋိဇီဝဆေး သောက်တာဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုး ကို ဖြစ်စေ” အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး နဲ့ ကာကွယ်ရေးဌာနကနေ သတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by lu bo at 9:22 PM No comments:
• ခပ်ပေါ့ပေါ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီး အော်စကာရခဲ့သူ
Posted by lu bo at 9:20 PM No comments:
လက်ခုပ်တီးမယ်ဟေ့ Sea Game နှင့် ရဲလေး
Posted by lu bo at 9:18 PM No comments:
Posted by lu bo at 9:15 PM No comments:
Posted by lu bo at 9:08 PM No comments:
ဆရာမ မရှိတော့ ပွတ်လောရိုက်နေကြ၏။
မကြာခင်မှာတစ်ကျောင်းလုံးကကြောက်သော မျက်နှာထားတင်းတင်း ဆရာမ အတန်းထဲဝင်လာ၏။ မီးကိုရေနဲ့ ငြိမ်းလိုက်သလို ချက်ချင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကျသွား၏။ "ဂွတ်မောနင်း တီချာ"
Posted by lu bo at 9:07 PM No comments:
Posted by lu bo at 9:05 PM No comments:
တစ်ခါတုန်းက လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာ အနှစ်သုံးဆယ်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီတော့ လူက တန်ခိုးရှင်ဆီ သွားပြီး ပညာတွေ သင်ချင်ပါသေးတယ်၊ သက်တမ်းတိုးပေးပါ လို့ တောင်းခံတယ် ။
သူ အဲဒီလို တောင်းခံနေတဲ့ အချိန်မှာ တန်ခိုးရှင်ရဲ့ ဘေးမှာ နွား၊ခွေး၊ မျောက် ဆိုတဲ့ တိရစ္ဆာန် သုံးကောင် ရှိနေတယ်။
Posted by lu bo at 9:04 PM 1 comment:
*** ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုအကြောင်း တစေ့တစောင်း ***
MyanmarDaily.net shared Promise Pauk's photo.
၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ က Health Digest (ခေါ်) အင်တာနက် သတင်းလွှာ မှာ ဖော်ပြသွားတဲ့ LET'S LEARN FROM JAPAN လို့ အမည်ရတဲ့ သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် နဲ့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါရစေ။
(၁) ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စိတ်အား ထက်သန်မှု ရှိစေရန် နဲ့ ကျန်းမာသန့် ရှင်းစွာနေထိုင်မှု ဓလေ့ကောင်းများ မွေးမြူတတ်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး၊ ဆရာ/ဆရာမများနဲ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စုပေါင်းကာ နေ့ စဉ် ကျောင်းအိမ်သာသန့် ရှင်းရေးကို ၁၅-မိနစ် လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်တဲ့။
Posted by lu bo at 9:02 PM No comments:
အသက်လေးက ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသွားတဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ ပြောလို့ဆိုလို့ တယ်မရချင်ဘူး။
ခုလည်းကြည့်လေ သူ့ရည်းစားကောင်လေးနဲ့ လျှောက်လည်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ မိုးတော်တော်ချုပ်နေပြီ ပြန်မလာသေးဘူး။
ကျုပ်မှာ စိတ်ပူလို့ သေတော့မယ်။ ဟော...အိမ်ရှေ့က ဆိုင်ကယ်သံကြားတယ်၊ ပြန်လာကြပြီ ထင်ပါရဲ့...
Posted by lu bo at 12:09 AM No comments:
"ကလေးတွေရဲ့ အသိဉာဏ်ကို ဘယ်သူထိန်းချုပ်နေသလဲ"
Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ ·
ဘယ်လောက်ပဲဆင်းရဲပါစေ.. အကောင်းဘက်ချည်းတွေးတတ်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူက သားသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု (Confidence) နဲ့ ယုံကြည်ခြင်း (Trust) ကို အများကြီး အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။
Posted by lu bo at 12:06 AM No comments:
Ann Lee shared နမ်းမဝ(အဖြူရောင်နတ်သမီး)'s photo.
အဲဒီမင်းသမီးလေးကို ဖန်ဆင်းရှင် အဖိုးဖြစ်သူက..ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကို သူ့ရဲ့လက်နဲ့ရိုက်ပြီး လှိုင်းများထစေကာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရေမြှုတ်တွေကနေတဆင့် “အက်ဖရိုဒိုက်” မင်းသမီးလေး ကို မွေးဖွားခဲ့တယ်။
Posted by lu bo at 12:04 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 1:29 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 12:50 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 12:47 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 10:56 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 10:51 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 10:48 PM No comments:
Funny Video 2013 HD - Razi de mori - Te caci pe tine de ras !
Posted by Cali For Life at 10:45 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 10:43 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 10:39 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 10:36 PM No comments:
Evanescence ရဲ့ အထူးဆန်းဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ် (သို့မဟုတ်) ‪#‎MyImmortal‬
၁၉၉၅ လောက်မှာ အမေရိကန် တေးဂီတ လောကထဲကို ‪#‎Evanescene‬ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ နေရာက အာကန်ဆက်စ် ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့
Posted by Cali For Life at 10:33 PM No comments:
Labels: I Love Twilight
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အအောင်မြင်ဆုံး တေးဂီတဝိုင်း တစ်ဝိုင်းဖြစ်သည့် Iron Cross တီးဝိုင်း၏ Lead ဂစ်တာသမားတစ်ဦးအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှု ရရှိထားသူ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ဆောင် သွားဦးမည့်သူမှာ ချစ်စမ်းမောင်ဖြစ်သည်။
Posted by Cali For Life at 10:30 PM No comments:
ကွန်ပျူတာ စကရင်ကို နေ့စဉ် နှစ်နာရီလောက်သာ ကြည့်ရှုသူတွေမှာတောင် ကွန်ပျူတာ အမြင်လက္ခဏာစု (Computer Vision Syndrome) ကို ခံစားဖူးကြ ရပါတယ်။
Posted by lu bo at 7:30 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 7:26 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 7:21 AM No comments:
Myanmar 2013 - Press Conference with Daw Aung San Suu Kyi
Posted by Cali For Life at 7:18 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 7:15 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 7:09 AM No comments:
တစ်ခါတုန်းက မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ ကျောက်မျက်ပညာကို တစ်ဖက်ကမ်းခပ်အောင် တက်မြောက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာကြီးရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ ထိုဆရာကြီးဆီကို လူငယ်လေးတစ်ယောက်က လာပြီးတော့
Posted by Cali For Life at 7:06 AM No comments:
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ ပညာရှာဖို့အတွက် ပိုက်ဆံဆိုတာ အရင်လိုအပ်တယ်ကွ တဲ့။ စာဖတ်သူတို့ လက်ခံပါသလား။ လက်ခံတယ်ဆိုရင် မှားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ....
Posted by Cali For Life at 7:03 AM No comments:
မိန်းကလေးဆိုတာ ပြင်ဆင်မှုအလှနဲ့ သဘာဝအလှဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။
ပြင်ဆင်မှုအလှပာာ မိန်းကလေးတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ သဘာဝ အလှကတော့ မိန်းကလေးတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရနိုင်ပါဘူး။
ပြင်ဆင်မှုကတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ သဘာဝအလှကတော့ နည်းနည်း ပြောချင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အပျိုစင်အတိုင်း တည်ရှိနေခြင်းကသာ သဘာဝ အလှစစ်စစ်ပဲ ညီမလေး။ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံပာာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ တစ်ချို့မိန်းကလေးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပာာ ပိုပြီး စွဲမက်ဖို့ကောင်းပေမယ့် အဲ့ဒါက မြတ်နိုးထိုက်တဲ့ အလှမျိုး မပာုတ်သေးပါဘူး။
Posted by Cali For Life at 9:22 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 9:19 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 9:16 PM No comments:
June 30, 2012 at 10:41pm
Posted by Cali For Life at 2:13 PM No comments:
August 3, 2013 at 5:30am
ငါ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်မှုဟာ သွေးကြောထဲက အက်တမ်ဗုံးတွေလိုပဲ
ဘယ် အစားအစာကို ရှောင်ရင် ဘယ်နှစ်ကီလို ကျဆင်းမယ် ဘာအ၀တ်တွေ ၀တ်လိုက်ရင်
ဘယ်လောက် Sexy ပိုကျမယ် အတွက်အချက်မှန်မှန်နဲ့
ကမ္ဘာကြီး အလှည့်ကျ စစ်ဖြစ်လိုက်ကြ
Posted by Cali For Life at 2:10 PM No comments:
ပြသနာတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ Learning English Fr...
Antibiotics not for running noses နှာစေးနေတာ ပဋိဇီ...
*** ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုအကြောင်း တစေ့တေ...